> Resource> Atụmatụ> Easy Ule Onye kere - Mee a Quiz na ala
Ule e kere eke dịtụbeghị nnọọ mfe. Wondershare QuizCreator-Enye gị kediegwu ahụmahụ na-eke a Flash dabeere ajụjụ. N'agbanyeghị na ị na-na na a newbie ma ọ bụ vetiran, na nke a mfe ule onye ị nwere ike effortlessly-eme ka ọkachamara, gbara ọkpụrụkpụ Flash quizzes na ule. Mmepe nke ule a onye na-arara nnukwu ntị ngwá ọrụ a na-eme ka ọ dị mfe iji. Ego atụmatụ nke mfe nke a ule onye!
Office 2007 rịbọn interface
The dị ọcha, enyi na enyi Microsoft Office 2007 interface nke QuizCreator e mere na-amụba ihe e kere eke arụmọrụ na-eme ka ọ dịkwuo mfe n'ihi na ọrụ na-eme ka a ule. Dị ka Microsoft ụlọ ọrụ ngwaọrụ na-ewu ewu na ndụ kwa ụbọchị, i nwere ike inwe maara na QuizCreator na a obere oge na-amalite na-arụ ọrụ gị. Ndị dị ike na-edezi atụmatụ, ị nwere ike mfe Ọkpụkpọ ederede na agba, Akara ókwú, hyperlinks, na ndị ọzọ si n'ime QuizCreator. Ihe bụ ihe ọzọ, ị nwere ike ịtọ font Njirimara maka dum ule gụnyere ajụjụ na azịza. N'otu aka ahụ na ụlọ ọrụ na 2007, ọtụtụ ihe dị ka oyiyi, ọdịyo faịlụ (dị ma ọ bụ ọhụrụ dere), na video faịlụ (Flash video .FLV ma ọ bụ Flash nkiri .swf) nwere ike-etinyere aka gị ule.
Ụdị dabeere edezi mode
Ọ dịghị mmemme chọrọ. Ị na-adịghị ama ihe ọ bụla banyere JaveScript ma ọ bụ Flash ActionScript. QuizCreator Enye Ụdị dabeere edezi mode n'ihi na ị na-eme ihe e kere eke na ntọala. Họrọ a ajụjụ ụdị na-abịa a mmapụta window na a preset ụdị. Ihe ị chọrọ ime bụ dejupụta na blanks si ubi ka ubi. Ma i nwere ike ihuchalu ule ntabi-elele mmetụta.
E nwere ọtụtụ nlezianya e wuru na-ule ọkpụkpọ ndebiri maka ị ịhọrọ site na ịgbanwe anya nke gị ule. Ọzọ siri ajụjụ ọkpụkpọ ndebiri dị online. E wezụga, i nwere ike ime ka gị ule anya ọzọ-ekere òkè na a n'ụzọ zuru ezu ahaziri imewe site edezi nhọrọ dị ka ndabere, panel, toolbar na ndị ọzọ.
Easy-ekwusara maka mgbanwe nkesa
Mgbe ị na-rụchaa ajụjụ e kere eke na preview bụ OK, pịa Asuanetop n'ịwa gị ule. Site n'enyemaka nke QuizCreator Online-abịa QuizCreator, ị nwere ike ozugbo ebipụta na bulite ule online na otu Pịa. Ọtụtụ na-ekwusara nhọrọ dị. Ọ bụrụ na ị na-achọghị ka n'ịwa a Flash ajụjụ, ị nwere ike ịzọpụta ya dị ka ihe executable faịlụ maka CD nnyefe, bupu ya dị ka a Okwu ma ọ bụ Excel faịlụ maka akwụkwọ dabeere na ule, ma ọ bụ n'ịwa a SCORM ajụjụ ngwugwu maka òtù LMS.
Akpaka N'ihi nsuso na mmụta akụkọ ọgbọ
The wuru na-E-mail atụmatụ gị bipụtara Flash ajụjụ na-akpaghị aka na-eziga results unu, ma ka mma ngwọta, QuizCreator Online na-abịa na QuizCreator dị. N'ihi ga-abụ nwere ike ikpokọta kpomkwem ke a akuko usoro. Na otú i nwere ike flexibly nyochaa n'ihi na mmụta akụkọ, ma jikwaa quizzes na sonyere mfe.
Alternative e kere eke usoro
Dị ka a na e kwuru n'elu, ọrụ gị nwere ike exported dị ka ihe Excel faịlụ. Na faịlụ a site na tupu set template format na ya nwere ike dị ka QuizCreator n'ịwa a oru ngo maka inwekwu edezi. Esonụ iwu nke template, ị nwere ike ịmepụta na gbanwee gị ule na Excel faịlụ.
Download Excel Template >>
Sample quizzes kere site QuizCreator >>
Ọfọn, ị nwere ike ịmepụta a ule dị ka nke a na a nkeji ole na ole. Ọ dị mfe na kensinammuo. Ya mere, ina malitere na ị nwalee e kere eke na-enwe mfe na nke a mfe ule onye!